Xindacheng စက်ရုံ, ပေးသွင်းကိစ္စ | တရုတ် Xindacheng ထုတ်လုပ်သူများကိစ္စ
နယူးမြင့်မားသောအမြန်နှုန်း Flat ယိုဆည်မြောင်းပိုက်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း (မြန်နှုန်း 300mmin)
မြန်နှုန်းမြင့်ပတ်ပတ်လည် dripper ဆည်မြောင်းပိုက်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း
Labyrinth အမျိုးအစားယိုဆည်မြောင်းပိုက်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း (extrusion4တိပ်)
ယိုဆည်မြောင်းစနစ်အား & စီမံကိန်းကို
ထုပ်ပိုး device ကို
ဆည်မြောင်းပိုက်ဂဟေဆော်ခြင်းနှင့်ပြန်ရစ် device ကို
ဆည်မြောင်းပိုက် & အွန်လိုင်းသိုင်းကြိုးစက်ပစ္စည်းအတွက်အပြည့်အဝအော်တို Winder
ကြိုး Extrusion ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း
ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း (အကြီးစားမော်ဒယ်) ကိုယ်မှာပေ
ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း (Eco-မော်ဒယ်) ကိုယ်မှာပေ
PP Fiber (Geo) သိုင်းကြိုးထုတ်လုပ်မှုလိုင်း
ပေ pellet စနစ်
PVC Fiber ပျော့ပိုက်စက်မြှင့်တင်ခြင်း
သင်္ဂြိုဟ်ခြင်းကိုခံ cable ကိုမြှောင်းပုံပိုက်ထုတ်လုပ်မှုပစ္စည်းကိရိယာများအားဖြည့်
နှစ်ချက်က Wall မြှောင်းပုံပိုက်စက်
ကြီးမား caliber ဆွန်းပိုက်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း
ပေစာရွက် (Co-extrusion) Extrusion လိုင်း
PVC Wave ကိုခေါင်မိုး Tile လုပ်ခြင်းစက်
ပလပ်စတစ် Extruding ကိုယ်ရေးဖိုင်, Wood နဲ့ပလပ်စတစ် Foamed ကိုယ်ရေးဖိုင်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း
PVC Plstic Extruding စာရွက်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း
စျေးကွက် Concept ကို
ယိုဆည်မြောင်းတိပ်ပစ္စည်းကိရိယာများ (300 မီတာ / မိနစ်) 2018IRANPLAS အတွက်သရုပ်ပြပါလိမ့်မည်
18-09-07 ရက်နေ့တွင်အားဖြင့် admin
ကျနော်တို့ 2018IRANPLAS.Our ကုမ္ပဏီအတွက်အသစ်ကအမျိုးအစား inline မြန်နှုန်းမြင့်ပြားချပ်ချပ်ယိုဆည်မြောင်းပိုက်လိုင်း (စတုရန်းမီတာ 300 / မိနစ်) တိုက်ရိုက်အီရန် 2018IRANPLAS exhibition.offer အတွက်ဧည့်သည်များမှအသစ်ကအမျိုးအစား inline မြန်နှုန်းမြင့်ပြားချပ်ချပ်ယိုဆည်မြောင်းပိုက်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းပြပါလိမ့်မယ်ကိုပြသပါလိမ့်မယ် စိတ်ရင်းမှန်နဲ့ w ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်များ၏ဆန္ဒပြပွဲများ ...
CHINAPLAS 2018 အတွက်အောင်မြင်သောဥရောပနှင့်အာရှထံမှဝယ်ယူအမိန့်အရ။
18-08-15 ရက်နေ့တွင်အားဖြင့် admin
ပြပွဲမှာ 1.Complete နယူးပြားချပ်ချပ်ယိုဆည်မြောင်းပိုက်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း, စဉ်ဆက်မပြတ်ပြေးမြန်နှုန်းစတုရန်းမီတာ 300 / မိနစ်, dripper အာကာသ 200mm ။ နှစ်ချက်စုံ Dripper လမ်းခွဲ + ကြားခံနည်းပညာ, devices များတူးဖော်3စုံကိုများနှင့်အဆင့်မြင့် & တည်ငြိမ်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်, Shock ကဖောက်သည်အိမ်မှာနှင့်ပြည်ပမှာ: ဒါဟာ N ကိုအဖြစ်အတူတူပင်ဖြစ်ပါသည် ...
2018 ယခုနှစ် 07th, မေလတွင်, Xindacheng လေးပါးစက် Co-extrusion နည်းပညာမူပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်ရာများအတွက် Krah ပိုက်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း, ထုတ်လုပ်မှုများအတွက်ရုရှားနိုင်ငံကိုစေလွှတ်ခဲ့သည်။
2018 ယခုနှစ် 07th, မေလတွင်, Xindacheng လေးပါးစက် Co-extrusion နည်းပညာမူပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်ရာများအတွက် Krah ပိုက်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း, ထုတ်လုပ်မှုများအတွက်ရုရှားနိုင်ငံကိုစေလွှတ်ခဲ့သည်။ 07th တွင်အများအပြားကွဲပြားခြားနားသောသတ်မှတ်ချက်များ၏မှိုနှင့်အတူအခြား Krah ပိုက်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းရုရှားဖောက်သည်ကိုစေလွှတ်ခဲ့ပါတယ်နိုင်ပါစေ ...
2018 Interplastic ပြပွဲ၏အောင်မြင်သောနိဂုံးချုပ်။
2018 Interplastic ပြပွဲ၏အောင်မြင်သောနိဂုံးချုပ်။ ပြပွဲကာလအတွင်းမြန်နှုန်းမြင့်ယိုဆည်မြောင်းထုတ်လုပ်မှုလိုင်းနှင့် Krah ပိုက်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့အသစ်အမျိုးအစား? နေအိမ်နှင့်ပြည်ပမှာ? လောဖောက်သည်တစ်ဦးကြီးများ? ငွေပမာဏကိုဆွဲဆောင်, သူတို့အထင်ကြီးသိရသည်။ ပြပွဲပြီးနောက်, များစွာသော cus ...
အဆိုပါ 32nd CHINAPLAS ဧပြီ 27 မှဧပြီ 24 ကနေမြင်ကွင်းကိုအပေါ်ဖြစ်လိမ့်မည်။
အဆိုပါ 32nd CHINAPLAS ဧပြီ 27 မှဧပြီ 24 ကနေမြင်ကွင်းကိုအပေါ်လိမ့်မည်, 2018.CHINAPLAS ပြပွဲအမျိုးသားပြပွဲ & ကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာ (NECC), Hongqiao, ရှန်ဟိုင်း, PR စနစ်တရုတ်မှာကျင်းပပါလိမ့်မည်။ Qingdao Xindacheng ပလတ်စတစ် Machinery Co. , Ltd မှရှိအချိန်ဇယားပေါ်မှာရှိနှင့်သင်တို့အဘို့စောင့်ဆိုင်းနေပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဆင့်မြင့်အီး ...
မူပိုင် 1 ယိုတိပ်လျှပ်စစ်ထိန်းချုပ်ဆော့ဖျဝဲ
18-08-14 ရက်နေ့တွင်အားဖြင့် admin
အဖွင့်: Qingdao Xindacheng ပလတ်စတစ် Machinery Co. , Ltd မှတစ်ဆယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းကတည်းက natianal "948" key ကိုစီမံကိန်းအင်းလေးပြားချပ်ချပ်ယိုဆည်မြောင်းပိုက်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းဖွံ့ဖြိုးဆဲ, လူကြိုက်များသောနှင့်လျှောက်လွှာတွင်တရုတ် IWHR နှင့်အတူပူးပေါင်း။ ဤအတဆယ်နှစ်များတွင် Xindacheng ကုမ္ပဏီ t သို့ချပြီးအပေါ်စောင့်ရှောက် ...
နေရပ်လိပ်စာ: Fu'an 2nd စက်မှုပန်းခြံ, Qingdao, တရုတ်
ဖုန်းနံပါတ်: + 86-532-83232838
ဖက်စ်: + 86-532-83233777